Wararka Maanta: Axad, Aug 12, 2012-Dabley hubeysan oo Waqooyiga Magaalada Gaalkacayo ee Gobolka Mudug ku diley hal nin mid kalena ku dhaawacay
Goobta uu dilku ka dhacay oo ah xaafadda Garsoor, waxaa durbadiiba soo gaaray Booliska, inkasta oo aan falkaas cidna loo qaban, dableydii weerarka geysteyna ay durbadiiba goobta ka baxsadeen.
Ilaa iyo hadana lama ogga cidda dilkan ka danbeysey iyo weliba sababta, waxaase jira warar ay dadku isla dhex marayaan, balse aan xaqiiqadooda la hubin oo sheegaya in weerarkaasi uu aha mid salka ku haya aano qabiil.
Saraakiil ka tirsan Booliska Mudug, oo maanta la hadlay qaar kamid ah warbaahinta maxalliga ah, ayaa iyaguna dhankooda sheegay in ay wadaan baritaan arintan la xiriira, natiijadana ay gadaal kasoo sheegi doonaan.
Dilka ganacsadahan ayaa imaanaya 2 todobaad kadib markii la toogtey nabadoon Maxamed Xasan (Fareey), wuxuuna dhinaca kale kusoo beegmayaa xilli ay magaalada Gaalkacayo ku sugan yihiin ciidamo badan oo halkaas loo geeyey si ay amaanka u xoojiyaan.
Magaalada Gaalkacayo oo ah magaalo aad u balaaran, una kala qaybsan laba dhinac oo ay ka kala arimiyaan maamullada Gal-mudug iyo Puntland, waxaa intii lagu guda jirey sanadka 2011 siyaabo kala duwan loogu diley dad ay tiradoodu 10 kor u dhaafeyso.